विभु लुइटेल - Nepal Magazine
काठमाडौँबाट १ सय १५ किमि परको सिन्धुपाल्चोक तातोपानीस्थित नेपाल–चीन सीमा नाका ०७२ को महाभूकम्प र ०७३ मा भोटेकोसीमा गएको बाढीपछि बन्द छ ।
त्यस रात अरूजस्तै चाँडै घर गएको भए सायद यसको श्रेय मैले पाउँदैनथेँ ।
नेपालप्रति मेरो ठूलो सम्मान छ । नाकाबन्दीपछि जनमानसमा भारतप्रति पैदा भएको वितृष्णाबारे पनि अवगत छु ।
“डर ला’ छैन ? छोरी मान्छे यस्तो जथाभावी हिँड्नु हुन्छ ? घरकाले केही भनेनन् ?”
रश्मि राज्यलक्ष्मीको परिचय बालकृष्ण समकी छोरीका रुपमा मात्र सीमित छ । उनी आफैँ भने एक निर्भीक र प्रभावशाली महिला थिइन् । उनी महिलाले पनि साइकल चलाउन पाउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँथिन् ।
व्यवसायीको मनपरी, फितलो अनुगमन
राती १२ बजे फेसबुकमा लाइभ गएर आत्महत्या गर्छु भनी ती विद्यार्थीले लगातार केही स्टाटस लेखेका थिए । त्यस्तो नगर्न सुझाव दिँदै धेरैले कमेन्टमै गाली पनि गरेका थिए ।